आफ्नैले हेपेपछि मञ्चमै प्रचण्डको रुवाबासी, माधवसँग गरे यस्तो गुहारNepalpana - Nepal's Digital Online
आफ्नैले हेपेपछि मञ्चमै प्रचण्डको रुवाबासी, माधवसँग गरे यस्तो गुहार
काठमाडौं । आइतवार राजधानीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य परशुराम तामाङको 'नेपाली कम्युनिस्टको कार्यदिशा' पुस्तक विमोचन कार्यक्रम थियो । प्रमुख अतिथि थिए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । पुस्तकमाथि टिप्पणीकर्ता थिए विश्वभक्त दुलाल आहुती र माओवादी नेता राम कार्की । पुस्तक विमोचन भयो । पहिला राम कार्कीले टिप्पणी गरे । त्यसपछि आए आहुती । दुबै माओवादी पृष्ठभूमिका नेता । आहुति भने अहिले वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी बनाउनतिर लागेका छन् । वैचारिक रुपमा अब्बल आहुती पहिले प्रचण्डकै कार्यकर्ता थिए ।
आहुतीले पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर माओवादी र प्रचण्डलाई सांकेतिक रुपमा दनक दिए । उनले माओवादीलाई खोक्रो नक्कली कम्युनिस्ट मात्रै भनेनन् वैचारिक रुपमा पतन वामपन्थी भने । यद्यपि उनले माओवादीको नाम भने लिएनन् । आहुतीले सबै नक्कली कम्युनिस्ट र पुँजीपतिको गुलाम बनेको भन्दै आफू सर्वहाराको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी बनाउन लागेको र त्यसमा आबद्ध हुन कम्युनिस्ट धारका मानिसहरुलाई आह्वान गरे । झण्डै घण्टा जति बोलेका आहुतीले अधिकांश समय माओवादीको आलोचना र आफ्नो पार्टीको बखानमा खर्चिए । त्यहाँ सुन्ने वक्ता थिए प्रचण्ड । सञ्चालकले समय सकिएको इशारा गर्दा पनि आहुतीले पेलेरै यहीँ हो मौका भनेर प्रचण्डलाई सुनाउन सम्म सुनाए ।
त्यसपछि पालो आयो प्रमुख अतिथिका रुपमा प्रचण्डको । विगतमा आफ्नै कार्यकर्ता रहेका आहुतीबाट सुन्न सम्म सुन्नुपरेपछि प्रचण्डले सुरुमै भने आज धेरै सुनियो । त्यसपछि उनले बोल्न सुरु गरे । पहिला त उनले पुस्तकको बारेमा सामान्य टिप्पणी गरे । त्यसपछि उनले टिप्पणीकार आहुतीमाथि वर्षिए । विगतमा जनयुद्ध लडेर आएको मान्छेले माओवादी, जनयुद्ध, प्रचण्डको अवमूल्यन गरेको गुनासो उनले गरे । माओवादी, जनयुद्ध र प्रचण्ड कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भन्दै पूर्वाग्रह र कुण्ठा राखेर इतिहासको अवमूल्यन गरिएको भन्दै प्रचण्डले आक्रोश पोखे ।
यसक्रममा उनले आफूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओसँग गरे । माओ सर्वोच्च नेता हुँदा चीनका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति लि छियाननियन विश्व भ्रमणमा गएको तर भ्रमणका क्रममा कतै पनि माओको नाम नलिँदा माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै टिप्पणीकारले प्रचण्ड भन्ने शब्द उच्चारण नगरेकोमा उनले गुनासो गरे । माओवादी र प्रचण्डको नाम नलिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, 'नाम लिन पनि किन अफ्ठेरो ? यो स्तरको आग्रह, पूर्वाग्रह, कुण्ठा ? के हो यो ? इतिहासको कुरा नभन्ने ?'
त्यसपछि उनले पुन माओकै उदाहरण दिएर आफू एक्लिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । माओलाई जीवनको अन्तिम कालमा श्रीमतीले समेत साथ नदिएको उल्लेख गर्दै आफू पनि एक्लिदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता आउने गरेको बताए । माओ जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको र आफूलाई पनि कहिलेकाँही १/२ वर्षपछि यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो । आफ्नो दिमागमा कहिलेकाँही त्यस्तो खालको चिन्तन आउने गरेको उल्लेख गरे ।
‘कहिलेकाँही मलाई पनि यस्तै हुँदो रहेछ। १/२ वर्ष जतिमा एक्लो पो हुने हो कि? माओले भनेजस्तै ‘म एक्लो हुँ,’ भन्नुपर्ने हो कि? कहिलेकाँही यस्तो चित्र पनि मेरो दिमागमा आउँछ । तपाईहरु यो पनि चिन्तन, मनन गरिदिनुहोला । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो ? पुस्तकका टिप्पणीकारहरुले प्रचण्डको नाम आउँछ कि भनेर किन डराउनु भयो ? यो व्यक्तिगत कुरा हो र ? व्यक्तिगत प्रशंसा खोजेको कुरो हो र ? ’ प्रचण्डले गुनासो गरे ।
प्रचण्डले आफू कम्युनिस्ट आन्दोलनको पाठशाला भएको दाबी गर्दै आफ्नो अनुभवबाट सिक्न आह्वान गरे । 'सिक्ने कि गाली गर्ने हो । कि सिध्याइदिने भन्ने हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव हो ठिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो भने हामीबाट तपाईंहरू केही सिक्नुस्,' उनले भने ।
पेरुका नेता गोञ्जालोको निधनसँगै क्रान्तिको एउटा मोडेल अन्त्य भएको प्रचण्डले बताए । गोञ्जालोको रिहाइको निम्ति नेपालका कम्युनिस्टले पहल गरेको तर त्यसको प्रभाव रिहाईको स्तरमा नपुगेको बताए ।
ओलीसँग एकता गरेर ज्ञान प्राप्त गरेँ
प्रचण्डले केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको पनि बताए । 'अस्ति पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा मलाई ताकेर सोध्नुभयो, के पाउनुभयो केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर ?, ' उनले सुनाए, 'के पाएँ भन्न त विभिन्न उतारचढाव छन् । चार पाँच घण्टा लाग्छ । तर, मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ भने ।' त्यो ज्ञान ओलीसँग एकता गरेपछि मात्रै प्राप्त हुने र त्यो ज्ञानबाट
पाठ सिक्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाएको प्रचण्डले बताए । 'ओलीबाट सिकेको ज्ञान अनुशरण गरेर गठबन्धन बनाउँ । नत्र ओलीले खान्छन् भनेँ,' उनको भनाइ थियो ।
मञ्चमा माधव नेपाल पनि थिए । एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउन सघाएका प्रचण्डले माधवलाई कम्युनिस्ट एकताका लागि आह्वान गरे । २१औं शताब्दीको समाजवादको मोडेलको खोजी गरिरहेका शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउन जरुरी रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘२१ औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवादको मोडल के हुन्छ भनेर खोज्नेहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसको प्रयास पनि भइरहेको छ । एक चरण विभाजित भएर हेरियो । त्यसरी लछारपाटो केही पनि लाग्नेवाला छैन । त्यसकरण फेरि एक ठाउँमा आएर हेरम् ।’
प्रचण्डले माधव नेपालकै अगाडि कम्युनिस्ट एकताका लागि हारगुहार गरे । त्यसो त प्रचण्डकै सामिप्यतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव नेपालले भविष्यमा माओवादीसँग गठबन्धन र पार्टी एकताको सोंच बनाएको विषय यसअघि नै बाहिर आइसकेको छ ।
भाद्र २९, २०७८ मंगलवार ०८:३८:२५ बजे : प्रकाशित
माधवकुमार नेपालले लिएको बाटो सही छैन : अष्टलक्ष्मी शाक्य
चीनको दादागिरी तोड्न एकजुट भए अमेरिका- बेलायत-अस्ट्रेलिया, भयो त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौता